ဇန်န၀ါရီမှာ ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ်အသစ်နဲ့ပြန်လာမယ့် Suzy – Trend.com.mm
Posted on November 24, 2017 by Noel
နာမည်ကျော်အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Suzy က သူမရဲ့ ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ် အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီလို့ပြည်ပမီဒီယာတွေကနေတစ်ဆင့်သိရပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ သူမရဲ့ ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ်အတွက်သီချင်းသစ်တွေကိုရွေးချယ်နေတယ်လို့ ရင်းနှီးသူတွေ ကပြောခဲ့ကြပါတယ်။
Suzy က မနှစ်တုန်းက “Yes? No? “ဆိုတဲ့ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင် ဂီတဘက်မှာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့တာပါ။ လာမယ့်ဇန်န၀ါရီမှာတော့သူမရဲ့ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ်အသစ်ထွက်ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Suzy ရဲ့ အင်တာတိန်းမန့်အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ ဂျေဝိုင်ပီက “Suzyက သူမရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါပြီ။ဇန်န၀ါရီလမှာထွက်ရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ရက်ကိုတော့အတိအကျမသတ်မှတ်ရသေးဘူး”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
Suzyက အသံလည်းကောင်းသလို သရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က မင်းသား Lee Jong Suk နဲ့တွဲပြီး “While You Were Sleeping” ဇာတ်လမ်းတွဲကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အချစ်ရေးမှာတော့ မင်းသားလီမင်ဟိုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လက်တွဲခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်က လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
၀ိတ်ချနေပေမဲ့ အချိန်ကြာတဲ့အထိကိုယ်အလေးချိန်မကျသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ?